Cayayaanka Habar-majeerteen Oo Mudo Bil Ka Yar Laga Laayey 81 Qofood – Codka Qaranka Tanadland
Cayayaanka Habar-majeerteen Oo Mudo Bil Ka Yar Laga Laayey 81 Qofood
Qormadaan waxaan uga waramidoonaa guud ahaan daruufta kaliftay inay gunta Habar-majeerteen ay kala daadato, oo sababay in agoonkii (C/weli Gaas) ahaa uu beeshiisa ka waayo qof dhag u jalaq siiya oo wax ka maqla. Waxaan kaloo aan maqaalkaan ku falanqaynayaa guuldarooyinka isdabajooga ah ee ay la kulantay gunta Habar-majeerteen, aniga oo ku qaadaadhigidoona guuldaro kasta mawduuc gooni ah. Kana faaloon doona guuldaro kasta asbaabihii sababta u ahaa.
Kororka Xasuuqa Gunta Habar-majeerteen :-
Sidaad ogsoontihiin taariikhdu markii ay ahayd (21/08/2016) xasuuqii loogeystey gunta Habar-majeerteen oo shirqoolka ahaa, waxaa subaxaas laga laayey 43 nin waxaana laga curyaamiyey dad gaaraya 70 qofood oo ay xaaladdoodu ahayd naf-kadhawr. Maqaalkii aan maalintaas ka qorayna waxaan ku saadaaliyey inay geeridu maalmaha soo socda ay kor u dhaafidoonto 60 qofood. Todobaad intaanay ka soo wareegin maalintii suuqyaraha xaafadda Garsoor ee xerada Dayax lagu shirqoolay maxaysatada Habar-majeerteen, geerida cayayaanka Habar-majeerteen waxay gaartey 65 qofood. Iyadoo uu xaalku ku cakiranyahay agoonta Habar-majeerteen, oo ay dhaawacoodii dagaalkii banka Dagaari owalba xamar ay ku daadiyeen qayb ka mid ah markay waayeen meelay kala dhigaan. Ayaa dhaawac ka badan kii dagaalkii banka Dagaarina loogu geystey xasuuqii suuqa xerada Dayax. Dabeed waxaa dhacday in mar kale lagu xasuuqay maxaysatada Habar-majeerteen bariga gobalka mudug.
Jabkii Ka Gaarey Maxaysatada Habar-majeerteen Bariga Gobalka Mudug :-
Tariikhdu markii ay ahayd (05/09/2016) degaanka kala bara deegaanta ciidka iyo dooxada Golol waxaa ka dhacay dagaal qasaarihiisu uu biyo dhiijiyey, beesha jileeca iyo liidnimada ku caanbaxday ee Habar-majeerteen. Dagaalka lagu xasuuqay maxaysatada Habar-majeerteen ayaa wuxuu ka dhacay degaanka u dhexeeya ceelka qadiimka ah ee (Ceel Bardaale) oo ay marto wadada wadaagsin iyo laaska (Ceel la-helay). Dagaalkaas ciidamada beesha (Sacad) waxay si xun ugu jebiyeen gunta Habar-majeerteen iyaga oo ka laayey 16 nin 24 kalana ka dhaawacay. Maxaysatada dagaalkaan lagu xasuuqay ayaa waxay ahaayeen maleeshiyadii fariisinkoodu uu ahaa laaska Godod, oo loogutalogalay inay u gurmadaan marka Habar-majeerteen lagu xasuuqo wadada wadaagsin.
Intaasi markii ay dhacday ayaa beesha Habar-majeerteen waxaa ku dhacay qal-qal iyo argagax wada saameeyey oo kalsoonida ka lumiyey. Waxayna bilaabeen inay beesha hawiye ay dhaqaalaha kala dagaalamaan oo ay mabnuucaan inay baabuurtoodu ay aado dekadda Bosaso. Arintaasi waxay sabab u noqotay in dekadda bosaso ay fariisato oo doomihii imaanjirey ay joogsadaan. Isbaaradii kaliya oo beesha Habar-majeerteen ay dadka ku dhicijirteyna ay hawlgab noqoto. Mudo gaaban ka dib markii ay dekadda Bosaso xirantay waxaa dhacday in mooryaanta Habar-majeerteen ay gadood sameeyaan oo ay dhexdooda islaayaan. Iyaga oo isku laayey xaafadda Mahbarka ee magaalada Garoowe. Maalmo dabadeedna waxaa dhacday in mooryan aan sanooyin wax guno ah qaadan, oo filahayey in mar uun ay xoogaagooda heli doonaan ay ka warheleen ganacsato xanaaqsan oo leh. Doomaha laga soo raro magaalada Dubai rarka intiisa badan waxaa rarta ganacsatada beelaha hawiye. Hadaan gaadii kooda la xanibana dekadda xamar bay aadayaan oo ay wax u raranayaan, dekada Bosaso na waa ay xirmaysaa. Markaas ayey maleeshiyada beesha Habar-majeerteen waxay weerareen agoon (C/weli Gaas) goor barqaa oo waxay xoog uga qaateen wixii hanti ah oo uu beeshiisa u hayey.
Arintaasi waxay ku qasabtay agoon (C/weli) oo ah nin ay beeshiisu yasto oo aysan ka amar qaadan, laguna yaqaan in uu yahay nin aad u jilicsan oo waxba aan go’aan ka gaari karin. Laguna xifaaleeyo in marka rayigiisa la weydiiyo in uu yiraahdo “Dad baan la soo tashanayaa ee ii kaadiya ayaamo”. In lagu qasbay in uu go’aankii waalida ahaa ee gaadiidka beelaha Hawiye ay dekadda bosaso ay uga joojiyeen in uu ka laabto. Arinta kale oo muhiimka ah waxa weeye walow agoon (C/weli Gaas) lagu qasbay inuu gaadiika beesha Hawiye uu dekedda Bosaso u fasaxo. Si dekadda bosaso ay dib ugu furanto oo rarka doomaha ee magaalada dubey helidiisu ay u sahlanaato. Hadana waxaa la filayaa inay ganacsatada beelaha Hawiye oo aan owalba u baahnayn dekadda bosaso, ay hada adgtahay inay wax kala soo degaan waxna ay ka dhoofsadaan dekadda bosaso oo ay quudiyaan mooryaanta Habar-majeerteen ee baahan. Maadaama la xiniinyo taabtay oo si xun looga caraysiiyey.
Sanduleynta Itoobiya Ay U Sanduleynayso Beesha Habar-majeerteen Jamhuuriyadda Somaliland :-
Dhawaan taariikhdu markii ay ahayd (02/09/2016) waxaa yimid caasimadda goblka Xarii ee Galdogob labo sarkaal oo tigre ah oo magaalada aad looga yaqaano. Niman kaan saraakiisha ah waxaa la kala yiraahdaa (Col: Mekonnen Raimok Gebremariam) iyo (Col: Kidan Issayas Berhane). Waxaana la socdey ciidan yar oo ilaalo u ah oo kuligood wada tigre ah. Dadka sida fiican u yaqaana waxay sheegeen in (Col: Mekonnen Raimok Gebremariam) iyo (Col: Kidan Issayas Berhane) inay afsoomaaliga aad u yaqaaniin. Ayna dhaqanka iyo qabaa’ilada soomaalida ay ku barteen mudadii ay deganaayeen magaalada Xamar, oo ay xubnaha ka ahaayeen jabhaddii tigreega ee (EPRDF). Mudodaas oo ah intii u dhexaysey 1977 ilaa iyo 1990 -kii. Niman kaanina waxay qabiiro ku yihiin la macaamilka soomaalida oo dowladda itoobiya ay uga danbayso. Labadaan sarkaal waxaa ka hoos shaqeeya oo gacanyare u ah kabtan sirdoon u ah dowladda itoobiya oo magaalada Garoowe degan lana yiraahdi (Asmalaash Wal-damiirat Andemariam). Isaguna wuxuu ka soo jeedaa qawmiyadda tigreega oo arimaha soomaaliya aan ku aaminin qof aan ahayn tigree inuu wax ka ogaado ama la macaamilo.
Saraakiishaan tigreega ah waa markii 12 aad oo ay yimaadaan magaalada Galdogob oo ay kula shiraan siyaasiyiinta beesha Harti. Sababta ay saraakiisha tigregu ay magaalada Galdogob u doorteen inay kulashiraan siyaasiyiinta beesha Harti, waxa weeye saraakiisha tigreega ah iyo beesha (Muumin Aadan) waxaa ka dhexeeya is-aaminaad qoto dheer. Saraakiisha tigreega ah waxay ogyihiin in beelah reer Tanadland iyo Habar-majeerteen ay ka dhexayso cadaawad gaamurtey. Marka mar kasta oo ay saraakiisha tigreegu ay yimaadaan magaalada Galdogob waxay u keenaan beesha (Muumin Adan) sir muhiim ah. Taas bedelkeedana waxay beesha (Muumin Aadan) ay ku yeesheen rag la shaqeeya oo uga xogwarama Hartiga. Labada sargaal ee tigreega ah waa niman ka dherigsan xaaladda quusta ah ee beesha Harti. Xataa waxay ka war hayaan inta nin ee ciidamada somaliland beelaha (Baho-nugaaleed) iyo (Maxamuud Garaad) ugu jira, oo ah 3000 ciidan ka badan.
Waxay kaloo ka war hayaan wiilashii (Axmed Garaad) oo (C/laahihi Xaaji Cumar Camey) uu ka iibsadey beesha Habar-majeerteen inta uga dhimatay dagaalkii banka dagaari iyo inta lagu curyaamiyey. Waxay kaloo xog-ogaal ay u yihiin sida loo wiiqay oo xasuuqa joogtada ah loogu hayo beesha Habar-majeerteen. Arinta ugu muhiimsan ee ay saraakiisha tigreega ahi u yimaadeen magaalada Galdogob waxay ahayd inay beesha (Axmed Garaad) ay ka sixiixaan heshiis la mid ah heshiiskii Habar-majeerteen ay ku sixiixeen magaalada (Addisababa). Xogta layaabka leh ee laga helay saraakiisha tigreega ah waxa weeye, intaanay saraakiisha tigreega ahi imaan magaalada Galdogob agoon (C/weli gaas) ayaa waxaa looga yeeray magaalada (Addisababa) in uu yimaado. Dabeed (C/weli gaas) markuu (Addisababa) tegey waxaa lagu qasbay in uu sixiixo heshiis beeshiisa loogu cabiidinayo Somaliland. Oo ah in beesha Habar-majeerteen ay faragelinta ka deyso Somaliland, qaasatan degaamada beelaha Hartiga ah ee Somaliland dega. Waxaa kaloo (C/weli gaas) loogu hanjabey in hadii ay fargalin danbe ay kusameeyaan somaliland, ay ciidamada Somaliland qabsandoonaan beesha Habar-majeerteen.
Maadaama ay saraakiisha tigreega ahi ay aaminsanyihiin in heshiiska beesha Habar-majeerteen ku saxiiday (Addisababa) ay ka qrindoonaan, jifada (Axmed Garaad) oo ah lafta kali ah ee beesha Habar-majeerteen ay ka adeegsadaan beelaha Dhulbahante. Inay la kulmaan (C/laahihi Xaaji Cumar) oo ay ka saxiixaan heshiis la mid ah heshiiska beesha Habar-majeerteen laga saxiixay. Habar-majeerteen sanooyinkaan danbe (Dhulbahante) intii ay gumeeyeen oo ay midiidinka ka dhigteen waxay Dhulbahante u bixiyeen “Cali-geeliba’ay”. Sheekada “Cali geeli-ba’ay” na waa qiso dhab ah oo ku saabsan wiil aabihiis uu qawsaar reer u ahaanjirey, oo markii aabihiis uu dhintay moodey geeluu aabihiis raacijirey inuu isagu dhaxal u helay. Markaasna nimankii geela lahaa ay Cali runta u sheegeen oo ay ku yiraahdeen “War geelaa ba’ye orad oo geela nooga tag aabahaa midiidin buu noo ahaaye”.
Xiriirka Itoobiya Iyo Beesha Habar-majeerteen :-
Beelaha Harti iyo taliska tigreega ee itoobiya marna xiriir fiican maysan lahayn, xataa markii ay itoobiyaanku dabadhilfyada ay ka dhigteen Hartiga oo awooda beesha Hawiye ay ku bur-burinayeen. Tigreegu mar walba waxay la safnaayeen oo ay taageerijireen xukuumadda Somaliland oo ay u cabiidinjireen Hartiga. Aalaa siyaasiyiinta Habar-majeerteen marka ay tigreegu ay u yeeraan waa’ay u cagajugleynjireen. Oo waxay ku eedaynjireen tigreegu inay hayaan xog ah inay la shaqeeyaan jabhadda ONLF. Mideeda kale sida laga weriyey saraakiisha tigreega ah, tigreegu si ay danahooda ugu fushadaan iyaga oo ka soo hor jeeda Habar-majeerteen oo Somaliland la safan, ayey beesha Habr-majeerteen waxay ku bajin jireen inay iyagu ka hor taaganyihiin Somaliland. Oo hadii aysan iyagu ka hor taagneyn Somaliland, ay somaliland waa hore qabsanlahayd beesha Habar-majeerteen. Ilaa heer cabsi darteed beesha Habar-majeerteen ay bilowday in nin Ogaadeen ah markay arkaan ay gardaduub inta ay u xiraan, ay inta tigreega la hadlaan ay yiraahdaan soo doonta niman ONLF ah ayaanu idiin haynaaye.
Dhawaanahaan sidaad la socotaan magaalada Garoowe iyo Gaalkacyo xaafadaha ay ka degaan mahbarku, waxaa ka socdey banaan baxyo ay beesha Habar-majeerteen ku barooranayaan “Ba’ayeey iyo Hoogayeey”.
Cayayaanka Habar-majeerteen xasuuqa joogtada ah ee mudada dheer ku socdey hada waxaad moodaa inuu karaar qaatay oo u marba marka ka danbeeya sii xoogeysanayo. Habar-majeeteen na maaha rag looga
bartay inay is difaacaan. Marka baroorta iyo boohintu waa mid ay isaga neefinayaan cadaadiska marba marka ka danbeeya ka soo daraya ee saaran. Tigreegii ay jeclaayeen oo ay islahaayeen hadaad Ey u noqotaan waa u idin badbaadinayaana hada waa u ka soo horjeedaa oo wuxuu u cabiidinayaa Somaliland. Saas oo ay tahay, dhowaan waxaa la filayaa in uu bilowdo dagaalkii kama danbaysta ahaa ee lagu cidibtiri lahaa cayayaanka Habar-majeerteen .
Maalintii ay taariikdu ahayd (02/09/2016) markaan maqlay warka farxadda leh ee ku saabsan sida ay tigreegu ugu cabiidinayaan beesha Habar-majeerteen Somaliland, waxaan la hadlay labo nin oo reer Tanadland ah oo degan magaalada Garoowe. Labada ninba markaan la hadlay waxay ii sheegeen inay shir u fadhiyaan. Labada nin meesha ay ii sheegeen inay ku shirsanyihiin waa labo hoteel oo kala duwan oo ganacsato reer Tanadland ahi ay magaalada Garoowe ku leeyihiin. Hoteelka loo badnaa oo ay raga reer Tanadland ku shirayeena wuxuu ahaa hoteelka ganacsade/xildhibaan (Cali Ameriko) ee (Hotel Emirates). Arinta ugu muhiimsan ee laga wadahadlayaana waxa weeye labada heshiis oo iskumidka ah ee tigreegu ay ka sixiixeen beelaha (Axmed Garaad) iyo Habar-majeerteen, iyo sida ay umadda reer Tanadland ay uga faa’iideysan karaan kala jebinta cadowga. Nin kasta oo reer Tanadland ahi wuxuu dareensanyahay in ay timid dharaar in mudaa la sugahayey. Waxaana aad moodaa in dadka reer Tanadland ay uriyeen saxan-saxadii guusha kamadanbaysta ah ee lagu dabargoynlahaa cayayaanka Habar-majeerteen. Beelaha reer Tanadland waxay rumaysanyihiin maadaama hartigii hiilka u ahaa Habar-majeerteen uu isaaq jiitey, hada inay haystaan fursad dahabi ah oo ay ku cidibtiraan cayayaanka Habar-majeerteen.
Gunta Habar-majeerteen Mindhaa Gawda Kama Deyno!!